Semalt समीक्षा: वेब स्क्र्यापिंग के हो?
वेब स्क्र्यापि वेबबाट जानकारी भेला गर्ने प्रक्रिया हो। जे होस्, डाटा बिभिन्न उद्देश्यका लागि भेला गरिएको छ। निकासी रोबोटहरू छिटो र अधिक सही वेबबाट जानकारी भेला गर्ने प्रक्रियालाई स्वचालित गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसोभए, वेब स्क्र्यापर्सहरूले तपाईंलाई धेरै समय बचत गर्दछ जुन अन्य गतिविधिहरूमा खर्च गर्न सकिन्छ।
वेब स्क्र्यापि of का उदाहरणहरू
वेब स्क्र्यापि rob रोबोटहरू कत्तिको उपयोगी छन् भन्ने दृष्टान्तको रूपमा, उदाहरणका लागि बिक्री टोली लिनुहोस्। राम्रो नेतृत्व प्राप्त गर्न, तिनीहरूले केहि चिसो कल गर्न आवश्यक पर्दछ। तर कसरी उनीहरू कसलाई कल गर्ने नम्बरहरू प्राप्त गर्छन्? नम्बरहरू बाहिर निकाल्नको लागि डाइरेक्टरी खोजी गर्नु राम्रो विचार हो। के तपाईंलाई थाहा छ सम्भावित ग्राहकहरूको स number्ख्याको फोन नम्बर पाउन कति घण्टा खर्च हुन्छ? यो समय खपत र निराशाजनक हुन सक्छ।
यो जहाँ एक वेब स्क्रेपर काम आउँछ। तपाईं यसलाई प्रोग्राममा वेबमा विशेष सूचीबाट निश्चित जानकारी निकाल्न सक्नुहुन्छ। सार्वजनिक सूचीबद्ध कम्पनीहरूको निर्देशिका खोजी गर्न फोन नम्बर र ईमेल ठेगानाहरू जस्ता सम्पर्कहरू निकाल्नको लागि तपाईं dexi.io रोबोट निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। यो केवल एक सरल दृष्टान्त हो। वेब स्क्र्यापर्स बिभिन्न डाटा भेला गर्ने कार्यहरूमा लागू गर्न सकिन्छ।
मूल्य तुलना साइटहरूले वेब स्क्र्यापिंग रोबोटको प्रयोग पनि गर्दछ जस्तै स्मार्टफोन, होटेल, क्रेडिट कार्ड, र बीमा केही उल्लेख गर्नका लागि विभिन्न उत्पादनहरूका मूल्यहरू निकाल्न। वास्तवमा, केहि तुलना साइटहरूले अर्को तुलना साइटहरूबाट डाटा स्क्र्याप पनि गर्छन्। अर्को शब्दमा, मूल्य तुलना वेब स्क्र्यापिंगको अर्को कारण हो।
तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा अगाडि हुन, तपाइँसँग डेटा पहुँच गर्न आवश्यक पर्दछ जुन केवल थोरै व्यक्तिको मात्र पहुँच छ। यसैले केही कम्पनीहरूले हजारौं रोबोटहरू बनाएका छन् जसले दुर्लभ तर लाभदायक जानकारी खोजिरहेका छन्। खेल शर्तमा, तपाईसँग अन्य बेटर्स भन्दा बढि डाटा हुन्छ, राम्रो तपाईको नहुनु।
वास्तवमा तपाईका सट्टेबाजहरू भन्दा बढि जानकारी पाउँदा तपाईले उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी किनार दिनुहुन्छ। उदाहरण को लागी, यदि देश A र B को फुटबल खेल छ, र देश A ले B लाई आफ्नो कुल भिडन्तको percent० प्रतिशत मा हरायो भने, धेरै bettors आफ्नो देश देश A मा राख्नेछ। तर यदि खेलको लागि ठाउँ देश मा छ बी, र तपाईं र केही अन्य bettors थाहा पाए कि A ले पछिल्लो घर मा पहिले कहिल्यै कुटपिट गरेको छैन, तपाईं बी मा दांव हुनेछ, र सबै शर्तहरु देश को पक्षमा गए भन्ने तथ्यलाई पनि यदि तपाईं अधिक पैसा दिनुहुन्छ भने जीत यो अरूको तुलनामा अधिक डाटामा पहुँचको साधारण फाइदा हो। यसले तपाईंको जोखिम सीमित गर्दछ र तपाईंको नाफा अधिकतम पार्छ।
वेब स्क्र्यापि। उपयोगी अनुसंधान उपकरण पनि हो
अन्वेषकहरूले तिनीहरूको गतिविधिहरूको लागि वेब स्क्र्यापरहरू पनि प्रयोग गर्छन्। विश्वविद्यालयहरू, गैर-सरकारी संस्थाहरू, र सरकारहरूले पनि वेब स्क्र्यापि ofको प्रयोग गर्छन्। केहि निकालेको डेटा केहि उद्देश्यहरु को लागी आवश्यक छ जस्तै पृथ्वीको राज्य को निगरानी, रोबोट कारहरु निर्माण, र यहाँ सम्म कि एआई-संचालित आविष्कारको लागि।
कसरी वेब स्क्र्यापिंगको साथ शुरू गर्ने
किनकि dexi.io ले एक धेरै सजीलो-प्रयोग-गर्न-उपयोग डाटा निकासी उपकरण बनाएको छ, तपाईं उपकरण कसरी प्रयोग गर्ने सिकेर सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। यो डाटा रिफाइनिंग, वेब क्रलिंग, र वेब स्क्र्यापि forको लागि धेरै प्रभावकारी छ। जबकि मेशिनहरूलाई डेटा अवस्थित हुन आवश्यक छ, dexi.io मेशिनहरूमा डाटा प्रक्रिया गर्न मद्दत गर्दछ।
अहिले सुरू गर्दै
तपाईंको पहिलो वेब स्क्र्यापि on्मा सुरूवात गर्दा, तपाईंले बाह्य डाटा प्रोसेसिंग वा डाटा अनुसन्धान अस्पष्टताबाट बच्न प्रयोग गर्नुपर्दछ। तपाईंले कागजातमा तपाईंको एल्गोरिथ्म र डाटा पछाडिको बुद्धि पनि बिच्छेद गर्नु आवश्यक छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो तपाईंको पहिलो पटक भएकोले तपाईं असफल हुन तयार हुनुपर्दछ, आफ्ना गल्तीहरूबाट पाठ सिक्नुहोस् र सुधार गर्नुहोस्। पहिले सुरू गर्नुहोस्, राम्रो।
यसलाई नि: शुल्क प्रयास गर्नुहोस्
तपाईं साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ र उपकरण नि: शुल्क प्रयास गर्नुहोस्। यसलाई साधारण फाँटमा राख्नको लागि, डाटा स्क्र्यापिंग रोबोटले कार्य गर्दछ जुन एक हजार व्यक्तिलाई पूरा हुन धेरै वर्ष लाग्नेछ।